IIMVELISO EZILI-10 ZEBEARD ZEMADODA AMNYAMA (UPHONONONGO LUKA-2021) - IINWELE ZAMADODA
Eyona Iinwele Zamadoda Iimveliso ezili-10 zeNtshebe zeMadoda aMnyama
Amadoda amnyama afuna iimveliso zeendevu ezifanelekileyo ukwenza ukuzilungisa, ukukhula kunye nokhathalelo kube lula. Uninzi lwamadoda amnyama aneenwele ezinde ezijiyileyo, ezenza ukuba ukhathalelo lweendevu lube ngumceli mngeni ngaphandle…
Amadoda amnyama afuna iimveliso zeendevu ezifanelekileyo ukwenza ukuzilungisa, ukukhula kunye nokhathalelo kube lula. Uninzi lwamadoda amnyama aneenwele ezinde ezijiyileyo, ezenza ukhathalelo lweendevu zilucelomngeni ngaphandle kwezixhobo ezifanelekileyo. Ngenxa yokuba ulusu lwakho lufuna ukucocwa, ukuthambisa, kunye nokondla ukukhuthaza ukukhula kweendevu, abafana abamnyama kufuneka batyale imali kwimveliso yeendevu ezikumgangatho ophezulu. Ezona mveliso zeendevu zibalaseleyo zamadoda amnyama zenziwe ngezinto zendalo eziphilayo ukugcina ulusu lwakho lunamanzi kwaye lusempilweni, ukunciphisa ukurhawuzelela kunye nenkwethu, kunye nokukhuthaza ukukhula okuluqilima. Ukunceda ukugcina kunye nokuhombisa iinwele zakho zobuso, uya kufuna ukusebenzisa ishampu yentshebe kunye nesilungisi esiya kucoca ubuso neenwele ngelixa sisebenza ukukhusela kunye nokuthambisa iindevu zamadoda amnyama. Uyakufuna kwakhona ioyile yeendevu, ibhalsam, ibrashi, ikama kunye nokusika ukuxhasa iimfuno zokuzilungisa kunye nesitayile. Ukusuka kwizixhobo zokuzilungisa ukuya kwiimveliso ezikhuliswe kakhulu, siphonononge ezona mveliso zokukhathalela iindevu zibalaseleyo zamadoda amnyama anokuzisebenzisa ngoku.
1Iimveliso ezili-10 zeNtshebe zeMadoda aMnyama
1.1Kit Beard - Shea Ukufuma Beard Kit
1.2I-Beard Shampoo-iViking Revolution Beard Shampoo kunye neCustomer
1.3Ukucheba iindevu-uPhilips Norelco Multigroom 7000 Uthotho
1.4I-Beard yeoyile-Ukunyaniseka kwe-Amish ye-Beard yeoyile
1.5Iindevu zebrashi-iZilberHaar Beard Brush
1.6Iindevu zoMdibaniso-weViking Revolution Umthi weendevu zeKama
1.7Beard Balm - iScotch Porter Iindevu zeBalm
1.8I-Beard Wax-I-Amish ethembekileyo ye-Beard Wax
1.9Beard Softener -Umnumzana oPholileyo ukukhula kweendevu kunye nesiQinisekiso sokuQinisa
1.10Isikere sentshebe-iSanguine Professional Beard & Mustache Ukucheba isikere
MbiniUkunyamekela iindevu kwaMadoda aMnyama
2.1Fumana iiMveliso zoMgangatho oPhezulu ngeZithako zeNdalo
2.2Sebenzisa i-Beard Shampoo, i-Conditioner kunye neoyile ukukhathalela ulusu lwakho
2.3Yitya kakuhle, Zilolonge rhoqo kwaye uphile ngendlela yokuphila esempilweni
2.4Yiba nomonde kwaye iindevu zakho zikhule
2.5Faka isicelo seBeard Balm kwisitayile
2.6Nciphisa iindevu zakho rhoqo ukukhuthaza ukukhula
Kit Beard - Shea Ukufuma Beard Kit
Enye yezona khithi zibalaseleyo zeendevu anokuzithenga umntu omnyama yile Shea Ukufuma Beard Kit . Ibhotolo ye-Shea yindawo ekumgangatho ophezulu yokutya okunesondlo kwiinwele nolusu.
Zonke iimveliso ezikule khithi zixutywe neoyile ye-maracuja, ethathwe kwi-passionfruit kwaye igcwele i-Vitamin C, calcium kunye ne-phosphorus elungisa ulusu kunye neenwele ezomileyo. Ikhithi yeendevu iquka ukuhlamba iindevu, ukuphazamisa, ioli ye-conditioning kunye nebhalsam.
I-Shea Moisture Kit yenziwe ngazo zonke izinto zendalo eziphilayo, iqulethe ii-sulphate okanye iparaben, kwaye iimveliso azikho nkohliso. I-shampoo ye-ndevu kunye ne-detangler ziya kukunceda ucoce, unciphise kwaye uthambise iindevu zakho ukukhula okunempilo.
Ioyile ye-ndevu kunye ne-balm isebenza ukuthoba iinwele ezirhabaxa kunye nokulwa i-frizz ukuze iindevu zakho zibe mpuluswa kwaye zilawuleke xa kusenziwa isimbo. Uyakuqaphela kwakhona ukuba iimveliso zokhathalelo lweendevu zisebenza kakuhle kulusu olubuthathaka.
Iimveliso zinephunga elimnandi elitsha kwaye zinokusetyenziswa kwaye zinanditshwe yiyo nayiphi na indoda emnyama ekhulisa iindevu okanye efuna ukuba iindevu zayo ezikhule ngokupheleleyo zibukeke kwaye ziziva zilungile.
Inkqubo ye- I-Shea Moisture epheleleyo ye-Beard Kit inazo zonke iimveliso zokukhathalela iindevu amadoda amnyama afuna ukuzilungisa kunye nokugcina iinwele zabo zobuso.
Izimvo eziyi-4,548 Ukufuma Shea Gqibezela iindevu Kit | Zonke izithako zendalo | Ioyile yeMaracuja kunye nebhotolo yeShea | Iindevu Ibhalsam | Iindevu zokuCoca ioyile | Hlamba iindevu | Iindevu Detangler | Ibhokisi yeZipho
IIMPAWU ZOTHOQO KUNYE NEEMEKO. Ukufakwa kwi-shea ...
UKUSETYENZISWA KWEZINWELE NGOKUGCWELE. Ukufunxa ngokukhawuleza ...
I-OYILE YAMARACUJA. Ioyile yaseMaracuja ihambisa ubuninzi ...
$ 39.95 Jonga iAmazon
I-Beard Shampoo-iViking Revolution Beard Shampoo kunye neCustomer
Njengophawu oluphezulu lokuzilungisa kwamadoda olwenza iimveliso ezisemgangathweni zeenwele, ulusu kunye nentshebe I-Viking Revolution Beard Shampoo kunye neConditioner akukho ngaphandle komgca wabo obanzi. Yenzelwe ukukhuthaza ukukhula kweendevu, ishampu kunye nesicoci acocekile, athambise, kwaye adibanise ukukhanya kwizinwele ezomileyo, ezomileyo zobuso.
Imnandi ipepermint yendalo kunye ne-eucalyptus, zombini ezi mveliso zineeoyile ezifanelekileyo. I-shampoo yenziwa ngeoyile ye-argan, eyondla ulusu lwakho, isuse kwaye ithintele ii-patches ezomileyo, ezinamaxolo, kunye nokuthambisa iindevu zakho.
I-conditioner yenziwe ngeoyile ye-argan kunye neoyile yejojoba, eneempawu zokuthambisa kunye neentsholongwane. Ezi zithako nazo aziyi kushiya intsalela encangathi okanye zibe negrisi, ioyile.
Ioyile kaJojoba ihlala isetyenziselwa ukunyanga amabala, ukhwekhwe, kunye nolunye ulusu olucaphukisayo, njengamaqhuma ezincakuba. Ioyile yeArgan kunye neoyile yejojoba esetyenzisiweyo ithathwa njengeyona superfoods yeenwele nolusu.
Ukuba unengxaki kulusu olurhawuzayo kunye neepetshi ezomileyo, I-Viking Revolution's Beard Shampoo kunye neConditioner Ziimveliso eziphambili kumadoda aMnyama ekufuneka uzame.
Intengiso 5,645 Izinto ezithethwe ngabantu I-Viking Revolution iindevu yokuhlamba kunye ne-Beard Conditioner Setha i-Argan kunye neoyile yeJojoba-ithambisa, ishukumise kwaye yomeleze ukukhula kweendevu-i-Natural Peppermint kunye ne-Eucalyptus Scent-Beard Shampoo w / i-Beard yeoyile (5 oz)
I-Beard Kit ephezulu-tier: Yenzelwe ukunceda kwimpilo ...
Akukho kurhawuzelela okanye ukucaphukisa: Yithi ndlela-ntle ekurhawuzeleleni ...
Lather up: Ukuhlanjwa kweendevu zethu kucocwe ngokunzulu kwaye ...
$ 14.88 Jonga iAmazon
Ukucheba iindevu-uPhilips Norelco Multigroom 7000 Uthotho
Inkqubo ye- UPhilips Norelco Multigroom 7000 Uthotho ilungele ukuzilungisa kunye nokucheba iindevu zomntu omnyama nakweyiphi na ubude. Wakhiwe kakuhle kwaye ubunjineli ngobuchwephesha, lo matshini yenye yezona zinto zilungileyo zokucheba iindevu kwintengiso ngawo nawuphi na umgangatho.
Iimoto zayo ezinamandla kunye nezingazonakalisiyo iincakuba zazo zinokucheba ngokulula iinwele ezirhabaxa nezigobileyo. Le trimm iza neziqhoboshelo ezingama-23 zokugcina iindiza, iindevu ezimfutshane, kunye neindevu ezinde. Le modeli ine-14 yoonogada abaqinisiweyo bokuvumela ukuba usike ngokusondeleyo ngaphandle kweenick, ukusika, ukucaphuka kolusu okanye amaqhuqhuva ezele.
Umatshini wenziwe ngentsimbi engenasinxibo ye-premium, kwaye umzimba wayo ocekeceke, o-slim uhambelana kakuhle esandleni sakho, ukukunika amandla okuhamba ngaphezulu kobuso bakho, isilevu kunye nomhlathi. Oku kusikwa kweendevu kunikwe amandla ibhetri ye-lithium-ion egcina iyunithi igcwele ngokupheleleyo iiyure ezi-5 kwaye inokuhlawuliswa ngokukhawuleza ukuba isetyenziswe ngokukhawuleza.
Lo matshini awunamanzi ngoko unokusetyenziselwa ishawa, uhlanjwe ucocekile phantsi kwamanzi abalekayo, kwaye awudingi nayiphi na i-blade oyile.
Eziguquguqukayo, ezinamandla nezomeleleyo, i UPhilips Norelco Multigroom 7000 Uthotho Imodeli enexabiso eliphezulu kunye noyilo lweprimiyamu.
Intengiso 34,557 Izinto ezithethwe ngabantu UPhilips Norelco Multigroom Series 7000 23 Piece Mens Yokucoca iKhithi, yokuCoca iindevu, iNtloko, uMzimba, kunye noBuso MG7750 / 49
Yonke into kwi-1 yokucheba kukhetho lwakho lweendevu, ...
Itekhnoloji yeDualCut ibonelela ngokuchanekileyo ...
Ukuhambisa i-torque ephezulu kunye namandla, konke ku-1 ...
$ 54.97 Jonga iAmazon
I-Beard yeoyile-Ukunyaniseka kwe-Amish ye-Beard yeoyile
Ngamafutha eendevu amaninzi kwintengiso, uninzi lunezithako ezimbalwa ezifanayo, yintoni eyenza Ukunyaniseka kweAmish yeendevu zeoyile ukhetho ogqibeleleyo amadoda amnyama neeoli zayo 7 ezibalulekileyo.
Le oyile ye-ndeard iphakanyisiweyo yenziwe ngazo zonke izinto zendalo, kubandakanya ioyile yeavokhado, ioyile yethanga leentombi, ioyile yemoringa, ioyile yealmond, ioyile yeapricot kernel, ioyile yegolide yejojoba, ioyile yeargan yeentombi, kunye neoyile ye-kukui.
Ifomula igcwele iivithamini, iiminerali, kunye nee-antioxidants zokulungisa iindevu kunye nolusu, ukukhuthaza ukukhula kweendevu, kunye nokunciphisa ukurhawuzelela kunye neepetshi ezomileyo.
Le oli yeendevu ayinazongezo zinemichiza erhabaxa kwaye ikhethwa ngamadoda amnyama ukugcina ulusu luthambile kwaye iindevu ziyabukeka kwaye zijongeka ngokupheleleyo. Inephunga elimnandi lee-clove kunye ne-licorice, elichitha malunga nemizuzu engama-20 emva kokufakwa kwesicelo.
Ukunyaniseka kweAmish yeendevu zeoyile yinto ethandwayo ekumgangatho ophezulu yokunakekelwa kweendevu, ke amathontsi ambalwa anokuhamba indlela ende ekugcineni intshebe yakho izilungise kakuhle kwaye inesitayile.
Izimvo eziyi-17,510 I-Amish ethembekileyo-Ioyile ye-Beard yesiqhelo-i-2 ounce
Isandla esenziwe eMelika
I-Organic yeVirgin Argan, iGolide kaJojoba kunye ne-6 ngaphezulu ...
Zonke izinto zendalo kunye nezendalo
$ 12.22 Jonga iAmazon
Iindevu zebrashi-iZilberHaar Beard Brush
Ibrashi elungileyo yeentshebe ivuselela iifollic zeenwele kwaye ikhupha iiseli zolusu ezifileyo phantsi kweendevu zakho. IsiJamani senziwe ZilberHaar iindevu Brush yibrashi yomthi wamapare eyenziwe kakuhle eneebristles zenyani, ezinokuthi zithintele intshebe erhabaxa, ejijekileyo kwaye isuse uthuli, ubutyobo kunye nobumdaka.
Iindevu ezicoliweyo zikhula kufutshane nobuso kwaye zinokubambisa iintsholongwane, zibangele ulusu okanye iinwele ezingaphakathi. Le bristles ibrust briffles ingena ngeendevu ezixineneyo, isusa ibacteria, kwaye iphulula ulusu lwakho ukuvelisa ioyile, ethi emva koko ithambe iindevu zakho. Ukuxubha imihla ngemihla kuya kunceda ukukhuthaza ukukhula kweendevu kunye nokuphucula ukubonakala kweendevu kunye nokuthungwa.
Le bhulashi intle, icwecwe isebenza kakuhle kwiindevu ezimfutshane ukuya kubude obuphakathi. Inkqubo ye- ZilberHaar iindevu Brush izakusebenza ngokumangalisayo kwindevu yakho kunye nolusu, olwenza ukuba lukhethwe njengebhrashi yamadoda amnyama.
Intengiso Izimvo eziyi-5,591 I-Beard Brush ngu-ZilberHaar - I-Stiff Boar Bristles-Ukugcoba iindevu kwamadoda-Ilungisa kwaye ikhuthaze ukukhula kweendevu -Isebenza nge-Beard yeoyile kunye neBhalsam ukuya kuThobisa iindevu -Iikhithi zeendevu-ii-intshi ezi-6 ubude
Yenziwe eJamani: Ubungcibi bobulunga ngayo yonke into ...
Ukunciphisa i-Beard-Itch: Ibrashi yethu yeendevu yenzelwe uku ...
Thambisa intshebe yakho: Iibhokhwe zendalo ...
Iindevu zoMdibaniso-weViking Revolution Umthi weendevu zeKama
Iingcali zicebisa ukuba umntu omnyama makame iindevu zakhe kanye ngemini, kwaye IViking Revolution Umthi weendevu ilungele ukuthambisa iinwele zobuso ezimfutshane okanye ukuphazamisa iinwele ezinde nezirhabaxa.
Yenziwe ngomthi wamaparele, le compact, ikhefu ekulungeleyo ukuhamba ineeseti ezimbini zamazinyo: enye yeenwele ezicocekileyo, kwaye enye inamazinyo abanzi ahlukeneyo okulungisa iindevu zakho ngaphandle kokutsala okanye nayiphi na into emileyo ecaphukisayo.
Ikama le-supple lilungele ukudibanisa ioyile ye-ndevu okanye i-balm ngentshebe yakho, evuselela iinwele zakho zeendevu kwaye inceda ukuthintela iinwele ezingenayo.
Ikaliwe kakhulu IViking Revolution Umthi weendevu yenye imveliso egqwesileyo evela kule nkampani kwaye yeyona ikama ilungileyo kumntu omnyama wokugcina iindevu zakhe zicocekile kwaye zisempilweni.
Intengiso 8,507 Izinto ezithethwe ngabantu I-Wooden Beard Comb kunye neTyala, i-Dual Action Fine & Coarse Teeth, igqibelele ukusetyenziswa nee-Balms kunye neeoyile, i-Top Pocket Comb yeendevu neeMadevu nguViking Revolution
Fumanisa ukuba yintoni oyiphosileyo-Fumanisa ...
Yenza ukuwa kwakhe eluthandweni kwakhona - jonga kwaye ...
Yalela ukuThathelwa ingqalelo xa ungena egumbini –...
$ 4.88 Jonga iAmazon
Beard Balm - iScotch Porter Iindevu zeBalm
Nje ukuba uhlambe kwaye ulungise iindevu zakho, kwaye ukame ioyile yeendevu kuyo, inyathelo elilandelayo ekulungiseni iindevu zakho kukufaka ibhalsam yamafutha. Inkqubo ye- IScotch Porter Beard Balm iyakuthambisa kwaye ikhusele iinwele zakho zobuso ngendlwana yokubamba emva kokuba uyihambile.
Le balm yentshebe ngumxube wezityalo ze-marshmallow ingcambu, i-elm bark emtyibilizi, kunye ne-kukui nut. Ifomula iya kongeza ukuzala, ukukhusela i-antimicrobial, kunye nolawulo kwiindevu zakho. Inephunga elikhanyayo le-sandalwood, musk, kunye nesinongo esingaginyisi mathe.
Kulula ukuyisebenzisa kwaye uyisebenzise, ​​thambisa nje i-dab-size dab kwiindevu zakho, emva koko uyiqhube ngekama kunye nokuxubha endaweni.
Ngaphandle kweekhemikhali ezirhabaxa okanye izinto ezingezizo ezokufakelwa, le balm iqhaqhazelisa iindevu ezirhabaxa, ezingqindilili, okanye ezomileyo kwaye yongeza ukugcwala, kwaneentshebe ezingakhuli ngokupheleleyo. Le balm yebhalsane yendalo yonke ayinamafutha okanye inzima kwaye iyakongeza ukukhanya, ukuthamba, nokulukuhla iindevu zakho.
Imveliso ephezulu yokutya eya kondla iinwele zakho zobuso imini yonke, awungekhe uhambe utyalomali olungalunganga I-Beard Balm yeScotch Porter .
862 Izinto ezithethwe ngabantu IScotch Porter-Onke amaBhele eNdoda aBeard Balm-3 oz.
YIBA KWIMEKO KUNYE NOKUTHUTHISA- Le balm yentsimbi yenza ...
I-MASCULINE SCENT - Iprofayili yevumba ineempawu ...
TAM INDLELA YAKHO - Ngokukhethekileyo emva kokuba uhlambile ...
I-Beard Wax-I-Amish ethembekileyo ye-Beard Wax
Yenziwe ngayo yonke into yendalo, i Ukunyaniseka kwe-Amish Beard Wax iya kunceda ukuthambisa iindevu zakho kwaye ubambe isitayile sayo endaweni.
Ifomula yobunini yale ntambo yeendevu igcinwa iyimfihlo, kodwa inkampani iyayityhila ingumxube weoyile ephilayo, ibutter, kunye ne-bex efunyanwa kwalapha ekhaya. Ukuba iindevu zakho zineenwele zasendle ezikhula ngandlela zonke, le wax yeendevu iya kukuvumela ukuba uzilawule phantsi kolawulo.
Le mveliso ikhusela kwaye inyibilikise iinwele zakho kunye nolusu ngelixa unika iindevu zakho ngokupheleleyo. I-wax inokungqinelana okunzima kunebhals yeindevu, kwaye abasebenzisi bancomela ukuyifaka emva kokuhlamba, kuba kulula ukuyiqhuba ebusweni bakho xa imanzi.
Inevumba elimnandi le-herbal kunye ne-citrus elinobudoda kodwa aloyisi.
Inkqubo ye- Ukunyaniseka kwe-Amish Beard Wax ibambe ngokuphakathi, kodwa yomelele ngokwaneleyo ukuba igcine iindevu zakho yonke imihla.
Izimvo eziyi-3,202 I-Amish ethembekileyo ye-Beard Wax - Yenziwe kwiZithako zeNdalo kunye neOrganic
Ulawulo lweendevu, ukuKhanya okuKhanyayo, uLawulo lweenwele oluQhelekileyo
$ 12.77 Jonga iAmazon
Beard Softener -Umnumzana oPholileyo ukukhula kweendevu kunye nesiQinisekiso sokuQinisa
Inkqubo ye- Umnumzana oLungisiweyo u-Beard Softener Ipakishwe ngeoyile yendalo kunye nezithako zendalo ezingqinisiswe ukuba zikulungele naluphi na uhlobo lweenwele. Le meko yeendevu ikwanayo ne-biotin, eluhlobo lwevithamini B esisondlo esifanelekileyo ekukhuleni kweenwele ezisempilweni, okwenza le mveliso ibe lukhetho olufanelekileyo kumadoda amnyama aneentshebe ezinamagqabi.
Ngombulelo kumxube weoyile yeargan, ioyile yomthi weti, kunye nobusi bemanuka, esi sithambisi sinobutyebi, ukungaguquguquki okubonakalayo okuthambisa iinwele zeendevu kunye nokugcina iinwele ezingalawulekiyo endaweni. Oku akuyi kukunika ukubambelela okuqinileyo njengebhalsam okanye i-wax, kodwa iya kunika iindevu zakho ukubonakala kulungiswe kakuhle.
Esi sixhobo asenzi ukuba iindevu zakho zibukeke zilungile, kuya kwenza ulusu lwakho luzive lusempilweni. Ioyile yomthi weti yi-antibacterial kwaye ihlala imiselwe ulusu olomileyo, urhawuzelayo kunye namabala. Ukuba unengxaki yeenwele ezingenayo, ke le mveliso yeendevu iyakunceda ukuphilisa la maqhuqhuva abuhlungu.
Ezinye izithako yi-eucalyptus, i-rosemary, kunye ne-peppermint, enika le ntshebe ukuthambisa ivumba elihlaziyayo, elitsha. Ukuba ufuna ukukhuthaza iindevu zakho ukuba zikhule kwaye kwangaxeshanye ucoce kwaye uthambise ulusu lwakho, nika I-Beard Softener ye-Gentleman epholileyo itrayi.
484 Izinto ezithethwe ngabantu Isilevu esiCocayo samadoda esiThoba iindevu -Intshebe yokujija ngeTi kunye neoyile yokuKhula kweendevu-Ukuzilungisa iindevu kunye nokuthambisa kweMadevu - Ukuhlamba iinwele kobuso bendalo - Ukuthambisa iindevu (8oz)
Ndikubuza umbuzo. Ukudinwa kukuqokelela ...
Yenziwe kwiresiphi yendalo. Yonke le yendalo ...
Khulisa iindevu zakho ngaphandle komzamo. Fumana iinwele zakho zobuso ...
I $ 17.97 Jonga iAmazon
Isikere sentshebe-iSanguine Professional Beard & Mustache Ukucheba isikere
Kuya kufuneka usike iindevu zakho ukuze zikhuthaze ukuba zikhule, kunye Isikere seSevu soBuchule sisixhobo sokusika esivunywe ngabachebi bezinwele kunye nee stylists. Ezi shears zenziwe ngesandla zenziwe ngentsimbi ebukhali yaseJapan, ngenxa yoko uyakwazi ukwenza ucoceko oluchanekileyo noluchanekileyo lweenwele zeendevu ezibhabha.
Iingcali ziyavuma ukuba ukusika kubalulekile ngexesha lokukhula ukuthintela ukwahlukana kwaye, ngakumbi kumadoda amnyama, iinwele ezigobelene kakhulu kulusu.
Esi sikere singasindi kodwa senziwe kakuhle kakhulu senzelwe ukuba silingane esandleni sakho ukuze uzinqumle ngokuzithemba iinwele kufutshane nobuso kunye nentamo.
Izixhobo ezifanelekileyo ziyimfuneko ekukhuleni nasekugcineni iindevu ezintle, kunye I-Sanguine Professional Beard & Isikere samadevu kufuneka ibe sisixhobo kwindawo yokugcina iindevu.
Intengiso 692 Izinto ezithethwe ngabantu Isikere sobuchule beMadevu kunye neSikere sokucheba iindevu, ngokuKhanya kakhulu, 5 '(13cm) -Mnyama
Isikere esinzulu esimnyama esingu-5 intshi, yiza ...
Amabala abukhali kakhulu okusika okucocekileyo, ngekhe ...
Isandla esenziwe ngesandla, esenziwe ngentsimbi yaseJapan i-J2
Iidola ezingama-24.90 Jonga iAmazon
Ukunyamekela iindevu kwaMadoda aMnyama
Fumana iiMveliso zoMgangatho oPhezulu ngeZithako zeNdalo
Amadoda amnyama aneemfuno ezizodwa zeenwele zawo kunye nolusu olwahlukileyo, zombini ezi kufuneka zihlanjwe rhoqo kwaye zithanjiswe. Uninzi lweebargain-basement okanye ii-generic brand zineekhemikhali ezirhabaxa ezinokuthi zome iinwele zakho zobuso kwaye zicaphukise ulusu lwakho. Xa uthenga iindevu kunye neemveliso zolusu, soloko ufunda iilebheli kwaye uqiniseke ukuba zenziwe ngomgangatho ophezulu, zonke izinto zendalo eziphilayo.
Uninzi lweesepha zinelye kunye neoyile yokuthambisa. Iisepha ezitshisiweyo ezishushu zihlala zenziwe ngezandla okanye zenziwe ngeebhetshi ezincinci kwaye zibonelela ngeemveliso ezisemgangathweni kuba iioyile zendalo ziyaphekwa ngexesha lokwenza isepha kwaye azange zongezwe nje emva koko (njengeesepha ezixineneyo).
Khangela ibhotolo ye-shea, ioyile yejojoba, okanye ioyile yeargan (ekwabizwa ngokuba yioyile yaseMoroccan) njengezithako, kuba ezi ziya kuyithambisa intshebe yakho kunye nolusu ngaphantsi ngelixa ugcina ubuso bakho busempilweni kwaye bucocekile.
Sebenzisa i-Beard Shampoo, i-Conditioner kunye neoyile ukukhathalela ulusu lwakho
Nje ukuba ufumene imveliso elungileyo yendalo, iindevu zakho zisaya kufuna ukuthambisa ngakumbi ukuthintela ukuba zome kwaye zibe krakra. Sukuhlamba kwaye ulungise iindevu zakho ngeshampu enye kunye nesilungisi osisebenzisa entlokweni yakho kuba ayenziwanga ngendlela efanayo yokunyakamisa ubuso bakho.
Uya kufuna ukuhlanjwa kweendevu kunye nokuthambisa okusebenza neoyile yakho yolusu yendalo ukucoca, ukuhambisa amanzi, ukondla kunye nokukhusela ekuvukeleni.
Abafana baya kufuna ukugqiba ukuzilungisa iindevu zabo ngeoyile yeoyile kunye nebhalsam. Zininzi ii-oyile ezisezingeni eliphezulu ezenzelwe ngokukodwa amadoda amnyama. Xa ujonga izithako, jonga iioyile ezisemgangathweni ezisemgangathweni eziya kugcina iinwele zobuso bakho kunye nolusu lufumile ngelixa inceda iindevu zakho zikhule zijiye kwaye zinde.
Ikhokhonathi, ipepermint, kunye neoyile yomthi weti zizongezo ezilungileyo ngenxa yeempawu zazo zokulwa neentsholongwane. Ioli yeArgan inokukunceda ukomeleza iifollic zakho zeenwele ukwandisa ukukhula kunye nokuzala. Ibhotolo ye-Shea ilungile ekulungiseni nasekukhuseleni ulusu ngaphantsi, ngakumbi ngexesha lesigaba sokukhula xa amanye amadoda esiba noburharha kunye nokurhawuzelela.
Yitya kakuhle, Zilolonge rhoqo kwaye uphile ngendlela yokuphila esempilweni
Ukukhula kwentshebe kuxhomekeke kwindlela ozikhathalela ngayo iinwele zakho nobuso bakho. Akunandaba nokuba uhamba ngeendevu ezimfutshane okanye ezinde, ufuna ukutya okunesondlo okugqibeleleyo kunye nenyama ecekeceke, intlanzi, imifuno, iimbotyi kunye namandongomane.
Ukutya ukutya okunempilo kunokunyusa ukukhula kweendevu zakho, kodwa kunokuba ngumceli mngeni ekufumaneni zonke izondlo ozifunayo rhoqo. Ngesi sizathu, kuya kufuneka uthathe izongezo, njengepilisi ye-multivitamin okanye ipilisi ye-biotin, ekwakhuthaza ukukhula.
iinwele ezinde ezinamaza amadoda
Zigcine uphilile emzimbeni, uzilolonga rhoqo nge-cardio kunye nokuphakamisa iintsimbi. Ukusebenza okukhuthaza ukuhamba kwegazi kunye nemveliso ye testosterone kuya kuba negalelo ekukhuleni kweendevu ezisempilweni kunye nezigcweleyo. Ngaphezu koko, ungalibali ukusela amanzi amaninzi imini yonke, eya kuthi ikhuphe isikhumba neenwele zakho.
Yiba nomonde kwaye iindevu zakho zikhule
Akunakuphikwa into yokuba ukukhula kweendevu ngumthambo wokuba nomonde. Kuya kuthatha iiveki ezi-4 ukuya kwezi-6 ngaphambi kokuba iindevu zakho zibe kwinqanaba apho zinokulungiswa kunye nesitayile. Njengoko ikhula, iindevu zakho ziya kuba namagqabi ekuqaleni, kwaye ngenxa yokuba iinwele zakho zirhabaxa kwaye zijijekile, uyakuba sengozini yokungena kwizinwele ezingaphakathi okanye kwiincakuba.
Ngeli xesha lokukhula, qhubeka nokhathalela ulusu lwakho kunye nezicoci zobuso ezifanelekileyo kunye nezinto zokuthambisa. Njengoko intshebe yakho ikhula inde, amabala amabi kunye ne-razor bump ziya kuncitshiswa kwaye zigutyungelwe.
Faka isicelo seBeard Balm kwisitayile
Emva kweenyanga ezimbalwa, kwaye iindevu zakho zikubude obufunayo, uyakufuna ibhalsam yentshebe kwimeko kunye nokuthambisa iindevu zakho. Uninzi lwee-balms zinee-bex, ezisebenza njengendawo yokukhusela kwaye ikuvumela ukuba ubambe iindevu ngendlela oyithandayo.
Ibhalsamu yebhals iya kwongeza umzimba kwiindevu zakho kwaye iyincede ukuba ibonakale igcwele kwaye inyani. Njengama-shampoos kunye ne-conditioners, qiniseka ukuba i-balm oyikhethayo inezithako zendalo kwaye ayinayo i-sulphate, iphunga lokufakelwa, i-parabens, okanye umbala wokufakelwa.
Nciphisa iindevu zakho rhoqo ukukhuthaza ukukhula
Kungabonakala ngathi kuchasene nento ekufuneka uyenzile, kodwa ukunciphisa intshebe yakho kubalulekile ekukhuleni kweenwele. Ukucheba kukuvumela ukuba ubumbe intshebe ebusweni bakho njengoko ikhula. Ukucheba iinwele zakho zobuso rhoqo kuthintela ukwahlukana, ukoma, kunye nokubhabha okungalawulekiyo. Xa iinwele ezomileyo kunye neziphelo ezahluliweyo zichetyiwe, inkqubo ikhuthaza iinwele ezintsha ukuba zikhule endaweni yazo.
iinwele ezintsha zamakhwenkwe
ukuphuma kwelanga nenyanga
ilanga kunye nenyanga zodiac